Ra’iisul wasaare Kheyre oo kormeeray xarumaha wasaaradaha Jubbalaan - Halbeeg News
Ra’iisul wasaare Kheyre oo kormeeray xarumaha wasaaradaha Jubbalaan
KISMAAYO (HALBEEG)- Ra’iisul wasaaraha Soomaalia, Xasan Cali Khayre oo maalinkii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maanta kormeer ku tegay qaar kamid ah Xarumaha Wasaaradaha maamulka Jubbalaan.
Ra’iisul wasaaraha iyo Hoggaamiyaha Jubbalaan, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) oo kormeerka Ra’iisul wasaaraha ku wehlinayay ayaa waxa ay la kulmeen qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradaha Jubbalaan.
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa kormeerka ku bilaabay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbalaan iyadoo Wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Warsame Darwiish uu sharaxaad ka bixiyay howlaha ay u hayaan shacabka Jubaland.
Wasiirka ayaa si gaar ah wuxuu u sharraxay hannaanka bixinta Jidadka Caasimada KMG ah iyo adeegyada loo qabto dadka kasoo laabanaya xeryaha qoxootiga Dhadhaabee dalka Kenya.
Axmed madoobe ayaa sheegay in ay kaalmo u baahanyihiin dadka ay saameeyeen abaaraha iyo kuwa kasoo noqonaya xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Waxaa uu intaa ku daray in qaxootiga ku nool Kismaayo ee Kenya ka soo laabtay ay ku adag tahay in ay la qabsadaan Nolosha loona baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo.
Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland ayaa isna sheegay in Jubaland ay diyaarisay goobo ku wanaagsan kalluumaysiga iyo beeraha oo shaqo abuur looga samaynayo dadka kasoo laabanaya Xeryaha Qoxootiga loona baahan yahay kalkan doorkii dowlada federaalka ah.
Xaaladda siyaasadeed ee Aljeeriya oo markale cakirantay ka dib markii uu Botafiiqa dib u dhigay doorashadii madaxtinimo
Soomaaliya oo raadineysa khabiir dhanka lacagaha ah si ay u beddesho lacagtii hore